Review – Gaming Noodle
တစ်ရှိန်ထိုး အောင်မြင်နေတဲ့ Fall Guys ဂိမ်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း
[Unicode] Fall Guys: Ultimate Knockout ဂိမ်းအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း Fall Guys: Ultimate Knockout ဆိုတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လအစောပိုင်းတုန်းကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ battle royale/ platformer ဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုပါ။ PC အတွက်ရော PS4 အတွက်ပါ ထွက်ရှိထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂိမ်းဇာတ်ကောင်လေးများ၊ ဟာသဆန်တဲ့ ကစားနည်းကစားဟန်များ၊ လေ့လာကစားရလွယ်ကူမှုများ စတာတွေကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း အလွန်လူကြိုက်များလာတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ကစားရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ Fall Guys ကို လျော့တွက်လို့ မရပါဘူး။ Battle royale ဂိမ်းတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပြိုင်ဆိုင်မှု လွန်စွာမြင့်မားလှပြီး လျှင်မြန်ဖြတ်လတ်စွာ လှုပ်ရှားဖို့နဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်သုံးကစားဖို့ လွန်စွာလိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကို အစောပိုင်းမှာ သေသေချာချာ မကစားပဲ ဟာသလုပ်နေလေ့ရှိသူများတောင် ဂိမ်းပွဲအချိန်ကြာမြင့်လာလေ …
တစ်ရှိန်ထိုး အောင်မြင်နေတဲ့ Fall Guys ဂိမ်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း Read More »
LOL ရဲ့ Auto Chess ခြေလှမ်း – Teamfight Tactics
[Unicode] LOL ရဲ့ Auto Chess ခြေလှမ်း – Teamfight Tactics ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး အချိန်တိုအတွင်း Hardcore Gamer အများစုကို ဆွဲဆောင်လာခဲ့တဲ့ Auto Chess ဟာ Dota2Arcaded Mode တစ်ခုအဖြစ်ကနေ Standalone ဂိမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကစားပုံကို Auto-battler လို့ ခေါ်ဆိုလာခဲ့ကြပြီး သီးသန့် Auto Chess ဂိမ်းတွေသာမက အခြား MOBA ဂိမ်းတွေကပါ သူတို့ရဲ့ ဂိမ်းကာရိုက်တာတွေကို အသုံးပြုကာ Auto Chess ဗားရှင်းတွေ အသီးသီး ထုတ်ပေးခဲ့ရတဲ့ထိ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် Google က ပေးတဲ့ Best Innovative …
LOL ရဲ့ Auto Chess ခြေလှမ်း – Teamfight Tactics Read More »
SEA GAMES Esports Dota2 (Laos Vs Myanmar) Game-2 Review
[Unicode] SEA GAMES Esports Dota2 (Laos Vs Myanmar) Game-2 Review Team Myanmar – Radiant Team Laos – Dire (First Pick) .: Ban Phase :. Team MM – Puck, Io, Venge, PL, Naga, Void Team Laos – Treant, Venom, Lina, Sand King, LC, Viper .: Pick :. Team MM – KOTL, Nightstalker, Tiny, Invoker (Last …
SEA GAMES Esports Dota2 (Laos Vs Myanmar) Game-2 Review Read More »
MDL Disneyland® Paris Major Review
လက္တေလာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့တဲ့ MDL Disneyland ® Paris Major ဟာ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ Dota Season ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ Major Tournament ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Major မွာေတာ့ Team Secret ဟာ Team Liquid ကုိ 3-1 ဆုိတဲ့ ရလာဒ္ျဖင့္ Grand Final တြင္ အနုိင္ယူခဲ့ျပီး ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 350,000 ႏွင့္ DPC Points 4950 ကုိ စြတ္ခူးခဲ့ျပီး ဒုတိယရရွိခဲ့တဲ့ Team Liquid ကေတာ့ ဆုေၾကးေငြ $170,000 ႏွင့္ 3000 DPC Points ကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ …
MDL Disneyland® Paris Major Review Read More »